Toamasina: Nilanja sorabaventy nitety tanàna ny mpampianatra mitokona
Nanao fitokonana teo anoloan'ny DREN Atsinanana ireo mpampianatra sy mpanabe eo anivon'ny SEMPAMA Nosy androany maraina io.
Taorian'izay dia nitety lalana izy ireo nihazo ny Cisco Toamasina I sy Cisco Toamasina II nilaza ny tsy faneken'izy ireo ny nambaran'ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena Horace Gatien sy ny fitorahana lakrymôzena ireo namany tao Antananarivo, ka nilazan'izy ireo amin'ny hiaka natao hoe : "Tsy velon'ny gazy lakrymôzena ny mpampianatra, tsy matahotra ireny koa ny mpanabe, mitohy ny tolona mandram-pisian'ny fanovana satria manao tsinontsinona ny mpanabe sy ny mpampianatra ataon'ny Fanjakana".
vendredi, 06 juillet 2018 19:01
Sambava: Vary simba 10 taonina no nodorana
Nampiahiahy ny mponina ny nanovan’ireto mpanafatra vary tampoka ny lokon’ny gonim-bary ka nanavaka ny vary simba sy lo tamin’izay mbola azo raofina.
Niditra an-tsehatra ny avy amin’ny sampandrahanan’ny varotra rehefa nahazo fampilazana mialoha ka niroso tamin’ny figiazana sy famotehana ireo vary samba miisa 200 gony ireo, omaly 05 Jolay, mba tsy hiparitaka ka hisy fiantraikany amin’ny fahasalamam-bahoaka.
“Sady nodorana no nalevina”, hoy ny fanazavan’ny talem-paritry ny varotra sy ny fanjifana aty SAVA, Be Christophe.
Faritra SAVA: Nividy fiara 4X4 mitentina 198.900.000 Ariary
Noraisina tamin’ny fomba ofisialy androany 06 jolay 2018 ity fiara ‘’Toyota Fortuner 2018 full option’’ ity, izay ho an'ny Faritra SAVA.
Vola madiodio avy tamin’ny tamberim-bidy ho an'ny Faritra no nividianana azy.
Marihina eto hoy ny lehibeny Faritra SAVA Velomaro Faustin fa "volam-bahoaka no nahafahana nividy azy ity ho ampiasaintsika ato amin’ny Faritra, ka raha hampiasa azy izahay dia mitaky tamberin’andraikitra.
vendredi, 06 juillet 2018 18:08
Farafangana: Mampiantrano ny fankalazana nasionaly ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny kaoperativa
Manome voninahitra ny lanonana aty an-toerana amin’ity andron’ny zoma 6 jolay ity ny minisitry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, Randrianarisoa Guy Rivoniaina.
Isan-taona, isaky ny sabotsy voalohany amin’ny volana jolay no natokana ho Andro iraisam-pirenena ho an’ny kaoperativa, izany dia nankalazaina nanomboka ny taona 1923.
vendredi, 06 juillet 2018 18:04
Malakialina - Mampikony: Sefo Fokontany 8 nosoloina tampoka
Miteraka resabe eto amin’ny Kaominina Malakialina, Distrikan’i Mampikony androany ny fisian’ny taratasy entin’ny Ben’ny Tanàna izay voafidy avy amin’ny HVM, taratasy voasonian’ny lehiben’ny Distrikan’i Mampikony manolo Sefo Fokontany miisa 8 amin’ireo 21 ato amin’ny Kaominina Malakialina.
Fahefana avy aiza no ananan’ny Ben’ny Tanàna mitondra taratasy fanoloana Sefo Fokontany, ary maninona no amin’izao ankatoky ny fotoana hanatanterahana fifidianana izao no misy fanoloana sefo Fokontany, hoy ireo Sefo Fokontany voakasika.
Nampafantarina omaly 05 jolay 2018 ny fahatongavan’ireo vomanga nafarana avy amin’ny FIFAMANOR (Fiompiana Fambolena Malagasy Norvezianina) any Antsirabe Vakinankaratra.
Ny fitondram-panjakana no niantoka azy, hoy ny Talem-paritry ny Fambolena sy Fiompiana aty SAVA, Dr Belahy Canut Dieudonné.
Hozaraina amin’ireo Kaominina rehetra ato amin’ny Faritra SAVA ireto vomanga ireto ka afaka telo na efa-bolana dia efa hahazoam-bokatra izany hoy hatrany ny avy amin’ny sampan-draharahan'ny fambolena.
vendredi, 06 juillet 2018 14:54
Ivandry: Karana vavy nisy naka an-keriny
Karana vavy iray, fantatra amin’ny anarana Sabera Vasram, no nisy naka ankeriny tamin’ny 1ora atoandro teo teny Ivandry, akaiky ny Pullman.